Cali Cosoble" Beesha Xawaadle Maamul ayay ku dhisanayaan Beledweyne" - Awdinle Online
Madaxweynihii hore ee Maamulka Hir-Shabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa si kulul uga hadlay howlaha la xiriira doorashooyinka ee ka socda Magaalada jowhar ee Caasimadda Hir-Shabeelle, kuwaas oo oo uu dhaliilay sida loo wado.
Waxaa uu sheegay in howlaha doorashada la xiriira ee ka socda Magaalada Beledweyne hadii aan lala xiriirin heshiiskii doorashooyinka Hir-Shabeelle ee horay loo gaaray inay Maamul Cusub ka dhisanayaan Magaalada Beledweyne.
“ horta Hir-Shabeelle maahan meel cid kale leedahay anaga ayaa leh, hadii wixii lagu heshiiyay la diido Hir-Shabeelle kale ayaan walaahi Beledweyne ku dhisaneynaa cid naga hor-istaagi karto majirto ayuu yiri” Cali Coosble.
Waxaa uu ku baaqay inaan la iska horkeenin Bulshada ku nool labada Gobol ee dowlad goboleedka Hir-Shabeelle, waxaana uu sheegay in hadii aan isbedel kale lala imaan maamul kale dhisanayaan.
Previous articleCiidanka Dowladda oo howlgal ku dilay Madaxiii Al-Shabaab u…
Next articleAl-Shabaab oo weerar khasaaro geystay ka fuliyay Kenya